Recent Activities : »
यतिबेला रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनेको छ । आगामी मंसिर चार गते संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ वा हुन सक्दैन ? त्यो त्यही समयले बताउला तर मंसीर चारगते राजनीति भाष प्रयोग नगरी भन्ने हो भने निर्वाचन हुन सक्दैन । विगत चार वर्षमा संविधान बन्न नसकी स्वतन्त्र सरकार बनाउने राजनीतिक दलहरु असफल भएको अर्थ त लागेकै छ र पनि उनीहरुको सिफारिसमा बनेको कर्मचारीतन्त्रको सरकारलाई पनि निर्वाचन गराउन सक्ने सहज वातावरण पनि दिन नसकेको आरोप छ ।
एउटा आश्चर्य लाग्दो राजनीति वातावरण निश्चित रुपमा देखिएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउन जनताले रगतको होली खेल्नु प¥यो । मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन जनता सडकमा आउनु प¥यो । राज्यको पुनरसंरचनाका नाममा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरेकै हुन् । राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास गरेर छ सय एकको नेतृत्व संविधानसभामा पठाएकै हुन् । चार वर्षसम्म राजनीतिक दलहरुको बाटो हेरेकै हुन् तर जनतालाई थाङ्नामा सुताइएको रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो दिनमा प्रमाणित भयो । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई नेतृत्व दिन नसकेको पुष्टि रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार बनाएर आफूलाई शीर्ष नेताको झुम्राको पुतली बनाएर देखाए ।
अहिले सुनिन्छ, फलानो मन्त्री फलानो दलको सिफारिसमा भएको हो । यो उसको सिफारिसमा भएको हो, आदि इत्यादि । यदि राजनीतिक दलहरुले नै सिफारिस गरेर कर्मचारीलाई सरकारमा ल्याउनु परेको भए किन दलीय सहमति कायम गर्न नसकेर हात उठाएर ? हाम्रा राजनीतिक दलहरुलाई अदृश्य शक्तिहरुको दबाब रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण लोकमान सिंह कार्की हुन्, यो सबैले भन्नछन् । भ्रष्टचारको आरोप लागेकाले साँच्चैनै भ्रष्टचारको जेरो उखेल्ने हो भने फेरि जनताले स्वागत गर्छन् है, नेपाली जनतामा त्यो दिल छ । यसका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
मुलुक जता मोडिए पनि मुलकले निकास खोजेको छ । मुलुकलाई निकास दिने हो भने राजनीतिक दलहरु प्रति नेपाली जनता आभारी हुन्छन् । यतिबेला नेपाली जनताको नेपालको राजनीति प्रति राम्रो बुझाइ छ । पाँच तारे होटलको सेमिनारमा एउटा राजनीतिक विद्वानले भन्ने कुरा गाउँको हलीगोठालालाई सोध्ने हो भने पनि आफ्नो भाषा र शैलीमा ठ्याक्कै त्यही कुरा बोल्छ ।
अब नेपाल जनता मुर्ख छैनन् भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । यो कुरा राजनीतिक दलका नेतृत्वले कति बुझेको छ ? वा छैन ? उनीहरुले नेपाली जनतालाई सोध्ने होइन, आफ्नो मनलाई सोधून् । आफू कुन धरातल र पानीमा छौं भनेर आफूले आफै“लाई मूल्याङ्कन गरुन । राजनीतिक दलहरुबाट गम्भीर त्रुटि भइसकेको छ । दलहरुको गम्भीर त्रुटिद्वारा मुलुकलाई खाडलमा हालिसके पछि पनि अझ आफुलाई उचो देखाउन विदेशी राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुमा धाउने प्रक्रिया फेरि शुरु भएको छ । यो नाङ्गै सहर घुमिरहेको राजाको कथा जस्तो हो । हाम्रा राजनीतिक दलका बादशाहहरुले नेपाली जनताको हिजोको बलिदान सम्झून् ! चाहे छ्यालीस सालको जनआन्दोलन होस, चाहे बैसठ्ठी–त्रिसठ्ठीको जनआन्दोलन होस छातीमा गोली थापेर लडेका रानीपोखरी र कलंकीका सहीदको रगत सम्झून् ! बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन । इन्दिरा गान्धीको हत्या कसले ग¥यो ? राजीव गान्धीको हत्या कसले ग¥यो ? अमेरिकाको टे«ड टावरमा कस्ले प्लेन धस्यो ? नेपालको राजतन्त्र कसरी समाप्त भयो ? माकुरालाई त उसैले जन्माएका बच्चाले खान्छ । यो उखान होइन, यथार्थता रहेछ ।
विगत संविधानसभाका चार वर्ष अत्यन्तै निरासपूर्ण भए । संविधान बनेन । संविधान नबन्नुको कारण के रह्यो ? फेरि निर्वाचन भैहाले छ भने तोकिएको अवधिभित्र संविधान बन्न सक्ने ग्यारेन्टी छ ? विगत संविधानसभाका चार वर्षमा राजनीतिक दलहरुलाई जनताका अत्यन्त महङ्खवपूर्ण उपलब्धिहरु गुमाएका हुन् । वास्तवमा जेठ चौध गते संसद् विगठन हुनेवाला थिएन । संसद् विगठन हुनुको पछाडि नेपाली काँग्रेसबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ । किनभने नेपाली काँग्रेसद्वारा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिन धालिएको थियो । तर अविश्वासको प्रस्तावका लागि गरिएको दस्तखत नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेताले कोटको खल्तीमा राखेर बरु कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा डा. बाबुराम भट्टराइको सरकारमा सहभागी गरियो । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अवस्थामा किन सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेशनगरी डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा पठाइयो र फेरि फिर्ता बोलाइयो ? यसको रहस्य बुझ्न पनि जरुरी छ, जति जेठ चौध गते संसद् विगठन हुनुलाई दोषी ठानिएको छ ।
अहिले वैद्यलाई नेकपा–माओवादीका रुपमा हाउगुजी खडा गरिएको छ । नेकपा–माओवादी नेपालको कुन राजनीतिक शक्ति हो ? देशको राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखिन दुई मध्ये एउटा कुरा हुन जरुरी छ । पहिलो राजनीतिक दल हो भने विधिको नियमभित्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनु प¥यो । यो होइन भने विद्रोही शक्तिका रुपमा विद्रोह गरिसकेको हुनु पर्छ । लाग्छ, यी दुई मध्ये एक कुरा पनि नेकपा –माओवादीभित्र देखिदैन । अनि वैद्यलाई सहभागी नगराई निर्वाचन गर्ने मिल्दैन भन्नुको तात्पर्य के हो ? वैद्यलाई बुख्याँचा बनाएर निर्वाचन भाँड्ने कुरातिर मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ । वैद्यको राजनैतिक रणनीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । विगतका दश वर्ष बन्दुक कसको नेतृत्वमा उठाइएको थियो ? कुन मिसनका लागि उठाइएको थियो ? यदि नेकपा–माओवादीको मिशन पूरा नभएको हो भने वैद्यद्वारा विगतका सहमतिका विरुद्ध विद्रोह किन भएन ? ठीक छ, त्यतिबेला उहाँ पनि झुक्किनु भयो, आज त विद्रोह गर्ने सक्नु हुन्छ । जसरी सहमतिको अधिकारिता हुन् जरुरी छ त्यसै गरी विद्रोहको पनि अधिकारिता हुन्छ ? विगत दश वर्षको शुरुका दिन उहाँहरु आफ्ना मागहरु राखेर अधिकारिक रुपमा विद्रोहीमा जानु भयो र राज्यले पनि विद्रोही शक्ति स्वीकार गरेर विद्रोही शक्तिका रुपमा सम्मान गरियो । राजनीति भनेको ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे भएर टाङ् लडाउने शक्तिका रुपमा बुझ्न हुन्न । र, वैधलाई हाउगुजी बनाएर वा बहाना बनाएर मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरु पन्छिन पाइँदैन ।
नेपाली जनताले जुन राजनीतिक दलहरुबाट आशा गुमाएका छन् त्यसको शंकालाई मेटाउन मुलुकलाई निकास दिनै पर्छ । वैद्यको कुरा त माओवादी मित्रको अन्तरविद्रोह हो । यसले राष्ट्रिय मूल राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्दैन । रेग्मीको सरकार गैर राजनैतिक सरकार हो र संविधान पनि छैन । केही दलको सिण्डिकेट मान्य छैन । माओवादीले गरेको दश वर्षे जनयुद्ध परिणाममुखी हुन् सकेन । भने, वैद्यले विद्रोह गर्नु प¥यो । अनि मात्र एउटा शक्तिका रुपमा मान्न सकिन्छ । नत्र यो मान्दिन त्यो मान्दिन भनेर राजनीति शक्तिका रुपमा मान्न सकिदैन । मुलुकमा भएका वर्तमान कतिपय कुराहरुप्रति असहमति जनाउनेको संख्याको एउटा एजेन्डै बनाएर जनमत सङ्ग्रह गरांै न, परिणाम त देखिहाल्छ नि ! जनताले बलिदान दिएर मलुकमा परिवर्तन भएको केही राजनीतिक दलहरुले कर्मचारी तन्त्रलाई सत्ता सुम्पिने ? गल्ती त बारम्बार हुँदै आएका हुन्, झन् महागल्ती त राजनीतिक दलहरुले गरेकै छन् । यो कुरा उनीहरुले स्वीकार्नै पर्छ । फेरि वैद्यलाई हाउगुजी र बहाना बनाएर निर्वाचन हुन सकेन भने त्यो त मूर्खतापूर्ण गल्ती हुन्छ । माओवादी भित्र वैद्यलाई एउटा वैद्य ग्रुप भन्नु पर्छ, राजनीतिक दलमाथि मैले उठाएका दुई प्रव्रिmया मध्ये एक नभइ मान्न सकिँदैन । हो, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु छायाँका रुपमा काम गरेको पाइन्थ्यो, अहिले नाङ्गो आँखाले ती शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप देख्न सकिन्छ । यसले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो गम्भीर रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।